Ronaldo oo markii ugu horreysay Calaamad GADUUDAN wajiga marsan doona kulanka soo socda ee Serie A…(Sabab Cajiib ah oo ka dambeysa) – Gool FM
Ronaldo oo markii ugu horreysay Calaamad GADUUDAN wajiga marsan doona kulanka soo socda ee Serie A…(Sabab Cajiib ah oo ka dambeysa)
(Europe) 22 Nof 2018. Cristiano Ronaldo, Dybala iyo dhammaan Xiddigaha kale ee ka ciyaarta Serie A, Macalimiinta iyo xitaa Garsoorayaasha ayaa calaamad GADUUDAN wajiga marsan doona iyagoo muujin doona sida ay uga soo horjeedaan dhibaatada lagu hayo haweenka.
UN ka oo soo qaban qaabiyay arrinkan maalinka caalamiga ee dhibaatada looga qaadayo haweenka adduunka ayay ciyaartoyda iyo tababarayaasha Serie A uga qeyb qaadan doonaan calaamad GADUUDAN oo ay wajiga marsan doonaan kulamada soo socda.
Kooxaha waxaa garoonka ku wehlin doona Haween xiran funaanadaha mashruucan lagu joojinayo dhibta lagu hayo, waxaa sidoo kale garoomada lagu soo bandhigi doonaa Boorar looga hadlayo iyo waliba Muuqaalo.
Saxiixa Cusub ee Juventus Cristiano Ronaldo ayaa isagu markii ugu horreysay ka qeyb qaadanaya sheekadan isla markaana wajiga marsan doona calaamada gaduudka.
Yeelkeede, Ronaldo ayaa dhex dabaalanaya fadeexad ah inuu kufsaday Kathryn Mayorga 34-jir ah, dhacdo 9-sano ka hor ka dhacday hotel ku yaala Las Vegas.
Xiddigii hore ee Real Madrid ayaa si cad u beeniyay sheekadaasi, wuxuuna sheegay in Qareenadiisa ay kalsooni ku qabaan kiiskan isla markaana ay runta soo daahiri doonto.